Sasak’alin’ny noely 2014 – 24/12/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Tamin’izany andro izany dia namoaka didy i Sezara Aogosta hampanoratra ny anaran’ny vahoakany amin’ny tany rehetra: dia fony i Sirinosy no governoran’ i Siria no natao izany fanoratana voalohany izany. Dia samy nankany amin’ny tanàna nihaviany avy izy rehetra mba hosoratana. Ary i Jôsefa koa niakatra avy tany Galilea avy tao an-tanànan’i Nazareta hankany Jodea ho ao an-tanànan’i Davida atao hoe Betlehema, fa taranaka sy fianakavian’i Davida izy, mba hosoratana izy sy Maria vadiny izay bevohoka. Fa raha tao izy, dia tonga ny fotoana hiterahan’i Maria, ary niteraka ny Zanany lahimatoa izy, dia nohodidininy lamban-jaza ka nampandriany teo amin’ny fihinanam-bilona, fa tsy nisy hitoerany tao an-tranom-bahiny. Ary tamin’izany tany izany nisy mpiandry ondry nitoetra tany an-tsaha niambina ny ondriny nandritra ny alina. Ary nisy anjelin’ny Tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitr’Andriamanitra nanelatrelatra manodidina azy ireo ka natahotra dia natahotra izy. Fa hoy ny anjely taminy: Aza matahotra ianareo, fa indro fifaliana lehibe ho an’ny vahoaka rehetra no lazaiko aminareo; fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan’i Davida, dia i Kristy Tompo. Ary izao no ho famantarana ho anareo: dia hahita Zazakely voahodidina lamba-jaza, sady mandry ao amin’ny fihinanam-bilona ianareo. Ary niaraka tamin’izay nisy antokon’ny tafika any an-danitra tonga teo